यि हुन बलिउडमा सलमान खानका कट्टर ५ दुश्मन ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > यि हुन बलिउडमा सलमान खानका कट्टर ५ दुश्मन !
यि हुन बलिउडमा सलमान खानका कट्टर ५ दुश्मन !
June 16, 2018 Bollywood
हिंजो सुक्रबारबाट रिलिज भएको सलमान खानको चलचित्र रेस ३ ले अपेक्क्षाकृत ब्यापार गर्न नसकेको समाचार भारतीय संचार माध्यमहरुले प्रकाशीत गरेका छन् ।
भारतीय चलचित्र समीक्षकहरुले रेस ३ लाई सलमान खानको सबै भन्दा बसबास चलचित्र भएको बताएका छन् । त्यसो त यो चलचित्रलाई नेपाली दर्शकले पनि जति रुचाउनु पर्ने अपेक्क्षा गरीएको थियो त्यसको ५० प्रतिशत पनि रुचाएको पाईएको छैन् ।
सलमान खानको असफलतामा दुखी हुने मात्रै नभएर खुसी हुनेहरु पनि छन् । यसै क्रममा एक भारतीय अनलाईन पत्रिकाले सलमान खानका ५ सत्रुहरुको बारेमा समाचार प्रकाशीत गरेको छ ।
सलमान खानको सबै भन्दा ठुलो शत्रु हुन अभिनेता बिबेक ओबराय । अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको कारणले यि दुई बिच दुश्मनी सुरु भएको थियो । ऐश्वर्या सलमान सँग ब्रेकअप भए पछि बिबेशको नजिक पुगेकी थिईन् । तर पछि ऐश्वर्याले बिबेकलाई पनि म्याचोड नभएको बताउँदै अभिषेक सँग बिवाह गरीन् । २००३ बाट सुरु भएको सलमान र बिबेक बिचको दुश्मनी अहिले सम्म निरन्तर चलीरहेको छ ।
गायक अरजित शिंह पनि सलमान खानको दुश्मनहरुको लिस्टमा सामेल भएका छन् । सलमान र अरजितको दुश्मनी २०१४ बाट सुरु भएको थियो । सलमानले होस्ट गरीरहेको एक अर्वाड कार्यक्रममा स्टेजमा अवार्ड लिन गएको बेला सलमानले अरजितको अपमान गरेका थिए । त्यसो त सलमानले चलचित्र सुल्तानबाट अरजितको गित पनि हटाएका थिए । यसै बिषयमा सलमानले अरजित सँग माफी पनि माग्नु पर्यो । माफी मागे पनि यि दुई बिचको दुश्मनी भने अझै कायम रहेको छ ।
अभिनेत्री श्रीदेवीको सौतेनी छोरो तथा अभिनेता अर्जुन कपुर पनि सलमानको दुश्मन भएको बताईएको छ । अर्जुन र सलमान बिचको दुश्मनीको कारण भने सलमानको पुर्व भाउजु मलाईका अरोरा हुन् । अर्जुन र मलाईकालाई सलमानले धेरै पटक बिना कारण धेरै ठाउँमा सँग सँगै देखेपछि यि दुई बिच दुश्मनी सुरु भएको हो ।
निर्माता तथा निर्देशक संजय लिला भंसाली पनि सलमानको दुश्मन भएको बताईएको छ । संजयले कुनै समय सलमानलाई लिएर हिट फिल्महरु खामोशी र हम दिल दे चुके है सनम बनाएका थिए । यि दुई फिल्महरुले सलमानलाई स्टार बन्न सहयोग पुर्याएको बताईएको छ । तर अहिले सलमान र संजय बिच बोलचाल सम्म छैन् । कतै सभा समारोहमा भेट्दा पनि यि दुई एक अर्का सँग नबोल्ने गरेको बताईएको छ । संजय र सलमान बिच के कारणले दुश्मनी भयो भन्ने कुरा अहिले सम्म खुलेको छैन् ।
कोरीयोग्राफर सरोज खान र सलमान बिच पनि लामो समय देखी बोलचाल छैन् । फिल्म अंदाज अपना अपनाको छायांकनको समयमा भएको दुश्मनी अहिले सम्म कायम रहेको छ । अन्दाज अपना अपनाको एउटा गितको छायांकन गर्दा सलमानले कोरीयोग्राफर सरोज सँग झगडा गरेको बताईएको छ ।